Ny asan'ny mpikambana ao amin'ny mpiasa manana traikefa manokana dia misy ny fametrahana ny milina sy ny lalantsika, fanirahana sy fanombohana ny fitaovana, fanofanana ny mpanjifa olona sy tanana tanana ary fanampiana manaraka ny mpanjifanay isaky ny mila ny serivisy.
SHIFENG dia miasa a tambajotra manerantany an-toerana masoivoho varotra ary serivisy mpiara-miasa mamela antsika hanome fanampiana ny mpanjifantsika amin'ny fanamarihana fohy rehefa tonga ny olana. Noho ny fitantanana mahomby amin'ny lafin-javatra mahomby isika dia afaka manome tahiry ara-potoana amin'ny alàlan'ny fanamarihana fohy ho an'ny milina taloha sy tsipika koa.
Mitovy amin'ny mpamatsy serivisy feno miaraka amina andalana sy milina marobe izay mandrakotra ny tontolon'ny maoderina rehetra, dia manohana ny mpanjifanay tsy ho mpivarotra ihany, fa mpanolo-tsaina amin'ny fananganana ny asa vaovao na fanitarana na famerenana indray ireo trano efa misy.
Izahay dia mamolavola trano famokarana efa vita, manomboka amin'ny fepetra takian'ny famokarana namboarina. Ny serivisy ara-teknikanay momba an'io toetra io dia tsy vitan'nyfahaiza-mamokatra kajy sy ny fanomanana lojika ary ny fandehanan'ny akora, fa koa ny famolavolana fitahirizana ny rihana sy ny fitaovana peripheral.
Ny fiheverana lehibe eto dia ny famokarana fizotran-javatra sy famoronana fahamailoana amin'ny famokarana hamela fanehoan-kevitra haingana amin'ny fepetra takian'ny matetika amin'ny tsena. Ity no fomba tsara indrindra hanatanterahana ny fampisehoana ambony izay mampiavaka ny tsipika sy ny milina ataontsika mba hahazoana antoka fa alefa ny vokatra farany.